Mgbakwunye Edemede na Dubai | Ọrụ - Ọrụ - Njem etu esi amalite ịkpata ego?
Mgbakwunye Blogging na Dubai
Ndị gụsịrị akwụkwọ na United States nwere ike ime ngwa ngwa ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụmụ akwụkwọ ha site n'ịrụ ọrụ na Dubai
Nwere ike 27, 2019
Ụzọ 5 Expo2020 ga - eme ka akụnụba nke Dubai
Nwere ike 28, 2019
Blogger Affiliate na Dubai
Mgbakwunye Edemede na Dubai bụ ihe ịtụnanya ụzọ iji mee ego online. N'agbanyeghị nke ahụ, ịmalite na ịnwa ego na-atụ ụjọ. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị na-ede blọgụ ndị na-ebido ma daa daa bụ ndị na-adịcha nkọ! Ozi ọma ahụ bụ na ị gaghị etinye ohere ọ bụla - gị nwere ike ghọọ onye blogger na-aga nke ọma mgbe ị na-eji usoro ndị a nwara na ezi!
Were anya, lee anya nyocha ndị a, n'ihi na otu n'ime ntụziaka ndị a is tiketi gị maka nnwere onwe ego site na ịde blọgụ. I dighi ịmalite 'naanị blọọgụ ọzọ'. Can nwere ike ịmalite blọọgụ na-enweta okporo ụzọ ma na-eme ka ahịa gaa n'aka nri.
O siri ike ịghara inwe mmasị na Mgbakwunye Mgbakwunye. Kedu ihe nwere ike ịka mma karịa ire ngwaahịaInweta ụgwọ ọrụ, na ịnaghị arụ ọrụ iji mezuo ma ọ bụ ihe ọ bụla? Ọ bụ ụzọ dị mma iji kpata ego, yana mgbe ị na-ejikọ ọnụahịa ahịa na ịde blọgụ nsonaazụ ya anaghị akwụ ụgwọ.
Super Affiliate Blogger bụ akwụkwọ ebook na-ede blọgụ na isi ya, mana ọ na-ewe slant dị iche karịa akwụkwọ ndị ọzọ anyị nyochara. Onye a na - enyere gị aka ibido ịde blọgụ dị ka ndị ọzọ, mana ilekwasị anya Mgbakwunye ahịa na-esetịpụ otu a iche.
Debe gị blog (isi na elu ozi kpuchie)
Jiri Keywords ma mejuputa SEO atụmatụ
Kwalite ozi gị na ịmepụta aha ndị na-adọrọ mmasị
Jiri njikọta njikọ njikọta na ụzọ ndị ọzọ nke ịnya ụgbọ ala
Ugbu a, ihe ndị ahụ bụ ihe ị ga-achọta n'ime ọtụtụ ederede ndị na-agwa gị otu esi amalite site na ịde blọgụ. O nwekwara ngalaba buru oke ibu na Mgbakwunye marketing. Ihe obula ikwesiri imata ya bu ihe esi adi ahia na usoro ndi ozo di elu.
Olee otú iji malite Mgbakwunye ịde blọgụ na Dubai?
Etu esi amalite Mgbakwunye ịde blọgụ na Dubai?
Ihe omuma a bu ezigbo ihe, mana o n’eme na-eduga n'echiche ndị ọzọ dị elu - obere ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na imirikiti akwụkwọ ahụ na-elekwasị anya na atụmatụ ndị dị mfe, ọ ga-agarịrị ihe dịka ịtọlite ​​ụlọ ọrụ mgbasa ozi jikọtara ọnụ, zuru ezu na Perkwụ Clickkwụ Pịpị Pịa na ibe peeji.
Nke a ekwesịghị ịbụ ihe esemokwu maka ndị mmadụ na-eme nke a ruo nwa oge, mana ndị ọhụrụ ga-enwe nkụda mmụọ. Ọ bụghị nanị na ọ dị ha mkpa mụta otú blog si eji usoro a, ma ha kwesịkwara ịmụta otú e si edebanye ebe a na-ebute ọdịda, chọpụta ihe ha ga-eji banye na igbe, NA were ohere na PPC, n'etiti ihe ndị ọzọ.
N'ikwu nke a, ngalaba a bara ezigbo uru maka ndị dị njikere maka ya. Newbies nwere ike iji ya mee ụfọdụ ntachi obi, ma ụfọdụ ga-enwe ntakịrị ntakịrị.
Ịbanye na okporo ụzọ Google
Na-agafe okporo ụzọ - anyị nwere mmasị na nkebi a! Ọ gara nke ọma banyere iji faili ntanetịime RSS na itinye ha n'okpuru n'ime akwụkwọ ntuziaka karịa usoro nduzi ọ bụla ọzọ nyochara. Nke a bụ nnukwu ihe n'ihi na rankntanetị na usoro kachasị mma iji nweta okporo ụzọ na-agbanwe mgbe niile. N'oge a na egwuregwu ahụ, ịmara banyere faili RSS dị mkpa.
Ihe ngwugwu a biara na ego azum nke ahụ nyere aka n'ezie ime ka o zuo ezu. Nke mbu, enwere ndepụta nke koodu g’enyere gi aka ikwalite blog gi. Ndị a bụ ihe kwesịrị inwe. Ha dị mfe ịmejuputa atumatu, mana ọ bụghị ọtụtụ mmadụ na-eme. Nke ahụ ga - enye gị nnukwu uru karịa asọmpi ahụ.
Mgbakwunye Blogger bụ nhọrọ na-enweghị echiche ọ bụla ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ isonye na ntinye aka dị elu iji dọta nnukwu ego. Ọ bụrụ na ịchọghị iru peeji nke ọdịda, wuo ndepụta, wdg. May nwere ike ịchọ ngwaahịa ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbaso nzọụkwụ nke ndị na - ere ahịa ntanetị nwere ndị na - eme nke ọma, ịgaghị enwe ike ịgahie nsogbu na ngwaahịa a.
Site- Shahbaz Khan Badil (Pakistan)
Dubai City Company ugbu a na-enye ezi nduzi maka ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, na-eburu nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi ugbu a, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates na iji asụsụ gị.